Offset gear mota
Offset gear mota, offset giya rekudzora, offset torque gearbox
F akateedzana akaenzana shaft helical gear minimer (giya yakazara kukuya, ruzha ruzha)
Iine hunhu hwakasarudzika Maburi ekuisa kumativi, kune iyo Space-optimized dhizaini uye Compact yakasimba yemagetsi mota coupling, Unibox dzimba, EnForced gearshaft coupling, kana iwe unogona kuisa neSevomomor coupling, Yakanyanya Wide ratio range (4 Matanho) Atex - giya rebhokisi re nharaunda dzakaputika 2G / 2D.
Iyo yakafanana shaft Helical Offset gear mota inotora modular dhizaini yekuumba chikamu, iyo inoderedza zvakanyanya mhando dzezvikamu uye masheya, uye inopfupisa kwazvo kutenderera kwekutakura. Iyo yakakwirira-kuomarara yakakanda simbi bhokisi nemapiki uye magiya anogadzirwa neyemhando yepamusoro alloy simbi. Kumusoro kunoomeserwa nekutakura uye kudzima. Iyo giya yekugaya yapera, kuendesa kwakagadzikana, ruzha rwaderera, kugona kwekubereka kwakakura, kukwirira kwekupisa kwakaderera, uye hupenyu hwebasa hwakareba.
0.50 rpm Offset Gear mota yeSALE. 1.5 rpm Kubvisa Gear mota yeSALE. 3.4 rpm Kubvisa Gear mota yeSALE. 4 rpm Kubvisa Gear mota yeSALE. Yedu Parallel shaft helical Offset giya mota inonyanya kushandiswa mune yakajeka indasitiri, indasitiri yemakemikari, zvekuvaka, michina yekudyisa, nezvimwewo. -kuwedzeredzwa.
Iyo compact rondedzero yakafanana shaft yakaiswa Offset giya mota s uye magiya anodzora anopa kwakanyanya kushanda uye kuchinjika nemamwe anotungamira mabrand. Yedu Parallel offset gearmotors inoshandisa inoshanda helical gearing. Izvo zvinogona kuve zvine huwandu hwesarudzo senge mabhureki kana dhisiki dhisiki. uye shaft yakasungirirwa nemuchina wekupedzisira. Tsvaga nyanzvi yetsika dhizaini dhizaini yemagetsi offset giya mota kubva kune sogears kugadzira uye Shanda nevatambi vedu vemota kuvaka giya mota kune yako chaiyo application.
Sogears mhando A offset giya motors inowanikwa mune 19 masaizi aine shaft-akaiswa magiya mabhokisi uye torque bracket uye tsoka kana flange-yakarongedzwa dhizaini. Yese Iyo getsi mota ndeye isingagumi magiya giya mota ichishandisa yakajairwa kutenderera magiya bhokisi kufa cast imba. Inogona kupihwa neakawandisa eDC motors kana AC MOTORA. ingova pane yako sarudzo.
1. F yakateedzana kudzoresa inogadzirwa kunoenderana nenyika dzepasi rose zvinodiwa uye ine yakakwirira yesainzi uye tekinoroji yezvinhu.
2, kuchengetedza nzvimbo, kuvimbika uye kusimba, nehupamhi hunowedzera huwandu, simba kusvika pa 90KW kana kupfuura.
3. F yakateedzana inoenderana shaft helical giya rinodzora ine yakaderera simba kushandiswa, kuita kwakanyanya uye kugona kwakanyanya kweanopfuura 95%. Bi-inotungamira mashandiro uye kugona kuve kumeso-kwakakwidzwa mune chero nzira kunogadzira 80 Furemu. Gearmotors sarudzo huru yemotokari yemagetsi, pombi, hoist, pasi pekuchengetedza.
4. Parallel shaft helical gear minimer ine kuderera kwakadzika, ruzha rwakaderera uye simba rakawanda rekuchengetedza. Iyo yakagadzirwa neyemhando yepamusoro 20CrMnTi zvinhu uye iine hukama hwakaoma hwe 58-62HRC mushure mekurwisa carburizing nekudzima kupisa kupisa. Mushure mekukuya, iyo chaiyo inogona kuve grey 5-6. Iyo yekushandiswa modhi ine izvo zvakanakira pamusoro kugadzira chaiko, kutapurirana kutapira, diki vhoriyamu inotakura kugona uye yakareba basa rehupenyu.
5, kuburikidza chaiyo machining, kuverengera kufanana kweiyo shaft uye iko kwechigadziko, zvese izvo zvinoumba giya rekuparadzira gungano rekudzikisa rakagadzirirwa mhando dzakasiyana dzemotor, kugadzira mehendi pamwe nemagetsi kusanganisa, zvizere hunhu hwemhando. yekushandiswa kwemotokari dzakagadzirirwa.
1 Q: Ndeipi MOQ yako yegiya mota?
A: 1unit yakagadzirirwa mhando dzakasiyana.
2 Q: Ndeipi nezve waranti yako yemotokari yegiya?
A: Rimwe gore. Isu tinopa Konecranes Offset Geared Motors Emaindasitiri paRs 40000 / unit muPune, Maharashtra. Tora mutengo wakanakisa kubva kwatiri izvozvi.
3 Q: Iwe unopa here OEM sevhisi nevatengi-logo?
A: Ehe, tinogona kuita OEM mirairo, asi isu tinonyanya kutarisa pane yedu chaiyo brand.
4 Q: Zvakadii nezvemitemo yako yekubhadhara?
A: TT, kumavirira mubatanidzwa uye kubhadhara. 100% mubhadharo wepamberi yekuraira zvakaderera madhora zviuru zvishanu. 5,000% dhipoziti uye chiyero usati waendeswa kune mairairo anodarika madhora zviuru zvishanu.
5 Q: Zvakadii nezvekutakura kwako?
A: Cartoni, Plywood kesi. Kana iwe uchida zvimwe, tinogona kurongedza zvinhu zvese nepallet
6 Q: Ndeapi ruzivo anofanirwa kupihwa, kana ndikatenga giya mota kubva kwauri?
A: Yakatarwa simba, gearbox chiyero, kumhanya mhanyisa, inokwira chinzvimbo. Zvimwe zvakawanda, zvirinani!
7 Q: Munoendesa sei giya mota?
A: Tichafananidza uye sarudza nzira dzakakodzera dzekutumira negungwa, nemhepo kana kuratidza courier.
Tinovimba unonakidzwa nekubatana nesu.
HT250 Yakakwira-yakasimba simbi
Kumusoro kuomarara kwegehena
Gear core kuomarara
Input / Inobuda shaft zvinhu
40Cr kana 42CrMo
Kupinza / Kuburitsa shaft kuomesa
HBS250 °--290 °
Shaft pane mafuta chisimbiso positi kuoma
Machining chaiyo magiya zvinhu
Yakaringana kusaga 4-6 giredhi
Kupisa, kusimudza, kudzima nezvimwe
Tsoka dzakakwira, flange rakakwira
Flange poda, mukati mekupinda, shaft poira
NSK, SKF nezvimwe
Mafuta chisimbiso brands
NAK, SKF nezvimwe
Y akateedzera mota
40Cr kana 42CrMo, Kusvirwa, kusimudza, kubvisa etc.
1. Zvakafanana kubuditsa, compact chivakwa, hombe yekufambisa torque, kugadzikana kushanda, yakaderera ruzha uye hwakareba hupenyu hwebasa. F Series: Chiedza Duty Kubvisa Gearmotors muAmbient Inoshanda Tembiricha Range -60˚F kusvika + 250˚F. AC mota yakatarwa kusvika 265˚F. Kunoumbwa rinoumba Housing.
2, yekuisa nzira: chigadziko kumisikidza, hollow shaft kumisikidzwa, flange kuiswa, torque ruoko kumisikidza, diki flange kumisikidza.
3, iyo yekutanga mhando yechipiri yekuisa uye yekubuda kutenderera nzira yakafanana, yechitatu nhanho yakatarisana; F / R mubatanidzwa kana wabvunzwa. Iyo Sogears inobvisa giya mota inonyanya kuita 143: 1 vhezheni yeimwe offset gearmotor. Kana iwe uchida kumhanyisa kumhanyisa kupfuura izvo izvo 143, isu tichakupa zvakagadzirirwa kwauri, iyi ndiyo mota yako!
4. Kuburitsa modhi: mhango shaft kuburitsa kana solid shaft kuburitsa. Yakareba nguva Injiniya dhizaini uye inogadzira izere mutsara wehomwe shaft offset yakafanana gearmotors, Inoshandiswa mukushandisa kwechikafu chekugovera michina, crange hosit zvishandiso, zvichingodaro.
5. Avhareji yekubudirira: 96% yeyakaundi yechipiri, 94% yechitatu chikamu, uye 85% yeF akateedzana / R mutsara.
Speed ​​ratio range: basic Type 3.81 ~ 281.71, F / R mhando musanganiswa inogona kusvika 31434
Torque mhando: 200 ～ 18000 Nm
Simba renzvimbo: 0.18 ~ 200 kW, iine bg simba giya mota asi inomhanya kanenge kaviri kumhanya. Yakakura kumarobhoti anoda kumhanya pamusoro pe torque!
chimiro chechimiro: F-shaft yekuwedzera mhando, tsoka inokwira FF-shaft yekuwedzera mhando, flange kubatana, FS- inoratidza axis yekupinda FA-axis yakaiswa kubatana, FAF-shaft yakakwira, flange yakakwira
Mhando huru dzeF dzakateedzana kufanana shaft helical gear minimer ndeidzi:
About Sogears Chinyorwa
NHOROONDO YOUPENYU: Sogears chiratidzo cheYantai Bonway Manufcaturer Co., Ltd. Iine makore anopfuura gumi '
michina yekugadzira zviitiko, Sogears anogara akasimba akamira pane iyo
nheyo yeCustomer Kugutsikana Kugutsikana.
QUALITY: Yekutarisa zvinhu, Kubuditsa Dhizaina, Yakapedzwa Midziyo Yekuongorora, Pre-dellivery Kuongorora
MISSION: "Kamwe uye nekusingaperi" ndicho chinangwa chedu kushandira vatengi munyika. Kamwe tinoita
bhizinesi nemutengi, tichaita bhizinesi nekusingaperi.
MARKET: Nyika makumi matatu dzakasiyana, kunyanya Germany, Austria, Japan, USA uye Middle-East.
KUNYORWA: 100% pane-nguva kuburitsa Yakavimbiswa.
SERVICES: Kurumidza kupindura muChirungu, chiGerman, chiJapan neChinese mitauro.
OEM: Maodha akagadziriswa anogamuchirwa kuSogears.